Waad isagoo xisbiga Halloween ah, waxaad leedahay? Waxaa si rasmi ah xisbi kasta Halloween la music weyn u dhaco. Songs reyreyn oo sharnimadiisa ku hadlaan creepiness u farxad ah munaasabadda gargaar oo dhan loo Waxyoodo ahayn in aad si aad u hesho in ruuxa spooky. Ma hubo waxa ay ka shidaal ilaa aad iPhone? Aw, halkaan oo dhan spooky Halloween fal-spiration aad u baahan tahay in aad rock xisbiga! Haddaba xisbiga bilaabi!
1. Super xukun jecel - Rick James
"Super xukun jecel" waa fiican song for kali ah iyo in ay jebiyaan barafka ka mid ah shisheeyayaal guud ahaan, dhinac Halloween noqon kartaa madadaalo weyn oo music habboon tahay. Dharka Snazzy, saxmadda Punk iyo vibes funky. Sii bilowga ah ee xisbiga maroojin gaar ah la gabaygan oo aad rock karaa xisbiga Halloween iyo madaxa aad bang tan iyo note ugu horeysay.
2. Ruuxa Town - gaar ah ayaa
Qof kasta oo ka dhigaa in la dagaalanka wuxuush, Kyung, vampires. Mid ka mid ah hits ugu weyn ka halyeeyada ska, gaar ayaa, ayaa eeriness ah kama taagna waxa ku xeeran, ayaa ka qayb qaatay vocals asalka, iyo moans ghostly ku dhexsameeysmo jirka. Waa Ma aha oo kaliya song cabsi badan qabsatay dareenka Halloween si aad u wanaagsan, laakiin waa song qabow in si dhab ah wuxuu sababi karaa in aad dabaqa qoob si lama filaan ah combust in qarax bambaano oo leh farxad ah.
3. bahal Mash - Bobby "Boris" Pickett
Halloween Tani waxay noqon lahayd ma Halloween aan "Mash bahal." Waxa ay si muran ku waa dhagax weyn ugu guulaha 'n' oo duudduuban cibaaro song ee waqtiga oo dhan. Bobby Pickett fula xiga ay qaado gaarto 100 sare music shaxda 3 jeer hees ka mid ah. October 20, 1962, la sii daayo asalka dhuftay tiro ka mid ah Maraykanka. Heesta iibiyey in ka badan 4 milyan oo nuqul iyo tan eegayey, kuwa sharka leh, cadahay, kama dambaysta ah Halloween aanad cadho burburin song ayaa la ciyaaray jeer xad-dhaaf ah tan iyo weligeedba.
Ah !! ay Halloween!
dhalmada No! Tani waa mid ka mid ah Halloween gabaygii awood biraha ugu fiican! Far ka xarriiq Diintooda, ka xiiso freating song, riff fool-jabiyo iyo weyn vocal, waa Cardiff oo ah nooca awood bir wax qora oo aan niyad jabin doono. Xisbiga arrintan ciribtir 13-daqiiqo ee epicness saafi ah oo aad madaxiinna oo bang doonaa sida waxaa kulanka berri lahayn.
5. Season ee sixirkii ah - Donovan
Waxaa laga yaabaa in fursad kale oo cad. Heeso Tiro yar ayaa saameyn aad u badan oo ku saabsan filimada B-farxaan sida tan psychedelic macaanka Donovan. 'Season ee sixirkii ah,' 1972 ee ka Zombie-meister George A. Romero, sheegayaa sheekada creepy of xaas ah oo dabbles in sixir. Tani saaxirad buuxay song tan Vibe saaxirad sexy goin 'on oo uu leeyahay dahsoon, taabashada beguiling in ay ka dhigi aad doonayaa inaan indhaha, aad khamri kabasho iyo uur aad baadkiisa.
Yaa aad qeybiso yeedhaan? GHOSTBUSTERS!
dhagax weyn Dance iyo sheekooyinka aan jirin oo kaliya wada tagaan. The song Misfits waxaa kale oo ku dabataagan macaanka Halloween in uu leeyahay filim magac la mid ah, oo waxay soo qaadatay music Halloween uruursanayey ah. Ayaa ilmihii oo ka mid ah dhinacyada Halloween tan iyo bilowgii, "Ghostbusters" tuuraa sida uu la joogay kooxda this orchestral iyo nooca jir music qabanqaabiyey in codadka si fiican u arki doonaa in aad ka dhigaysa suulka tuubada aad u badan.
7. Jidka High Jahannamo -AC / DC
Song in tebinaysa harmonies xun! "Way High Jahannamo" AC / DC ee waa habayn kaamil ah in had iyo jeer xusuusin u resonance awood dareenka adiga iyo runtii Sarre aad tamarta u dhow afjaridda xisbi tipsy. Oo sanqadha cadaw iyo lyricism kiciyaan qarqaryo weyn oo dhigay koorsada xisbiga kasta ricyo thrills iyo joyride ah nafeedba. Y'all yeelan doonaan waqti wanaagsan Halloween this.
8. Tani waa Halloween - Marilyn Manson
Mawduucan ah Tim Burton ee 1993 kartoon music, "Qarow ka hor ciida Christmas", daboola Marilyn Manson sanadkii 2006, kaas oo u muuqday mid aad u soo jiidasho badan inuu ka tago ka mid ah playlist ah.
Isudheeli oo dhan chords midig, gabaygan qaadataa in aad dib u eegaan oo dhan spooky ah madadaalo tan Halloween nidaam sawir classic jecel iyo ku siin doonaa goosebumps waqti kasta. Waxa uu helo eeriness this xayiran ee madaxa si fudud, sidoo kale.
Dareen sida samaynta qof kasta oo ay seexanayaan la niyadda cabsi ka dib markii xisbiga? Bedelka aad playlists Halloween ka Lugood in aad iPhone oo la wadaag saaxiibadaada caawa! Waxaad haatan aad sariirta. Hadda ku raaxaystaan ​​lullabies spooky!
Wondershare TunesGo waa Lugood Saaxiibkiis fiican ee Android iyo macruufka., kuu maaraynta music si fudud aad iPhone, iPad iyo Android. Sidaa daraadeed, waxaad ka Lugood si iPhone / Android wareejin karaan music fudayd. Download TunesGo in ay dajiyaan songs Halloween si Lugood, maamuli lahayd Halloween liiska songs xisbiga, wareejin playlists si aad iPhone, Android oo dheeraad ah.
> Resource > iPhone > 8 Songs Halloween Terrifyingly Cool dhagixii Halloween xisbiga Your